Voarara tao Torkia ny Blogger.com · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Avrily 2019 4:24 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana Oktobra 2008)
Fanamarihana: Misy fanavaozam-baovao fanampiny any amin'ny faran'ny lahatsoratra. Miangavy anao hijery izany.
Nanakana ny fidirana tamin'ny tolotra fampiantranoana bilaogy malaza Blogger (Blogger.com sy Blogspot.com izay an'ny Google) ny fitsarana Tiorka nanomboka ny Zoma 24 oktobra 2008. Araka ny basbasBas.com , ny bilaogera Holandey iray monina ao Istanbul no nampahafantatra anay momba ity raharaha ity:
Ahiahiana fa misy ifandraisany amin'i Adnan Oktar ny anton'izany, izay heverin'ny sasany fa mpisolovava ny Miozolomana sangany mpiaro ny famoronana, izay efa nahavita nitantana ny WordPress, ny vondrona Google , ary ny tranonkalan'i Richard Dawkins teo aloha.
Nahita ity hafatra ity ireo mpisera aterineto Tiorka rehefa niezaka nitsidika ny Blogger.com sy ny bilaogy rehetra nampiantranoina tao amin'ny blogspot.com: ” Naato ny fidirana ato amin'ity tranonkala ity araka ny fanapahan-kevitra laharana faha 2008/2761 avy amin'ny Fitsarana Heloka Bevava Ambaratonga Voalohany ho an'ny Fandriam-pahalemana TR Diyarbakir.”
Pikantsary tamin'ny pejy voasakana Tiorka. Sary: BasBasBas.com
Ity no ohatra faharoa tamin'ny tolotra famahanana bilaogy malaza nosakanana tany Torkia. Tamin'ny volana Aogositra 2007, nanakana ny fidirana tamin'ny sehatra wordpress.com iray manontolo ny Fitsarana Sivily Faharoa Ambaratonga Voalohany Tiorka taorian'ny voalaza fa fitoriana nataon'ilay mpanakanto Islamika Tiorka , Adnan Oktar, fantatra amin'ny anarana hoe Harun Yahya .
Tena nanimba ny fidiran'ny mpisera Tiorka tamin'ny aterineto i Adnan Oktar. Nahavita nandrara ny vohikala maro lehibe izy noho ny fanapahan-kevitry ny fitsarana. Ankoatra ireo tolotra famahanana bilaogy roa ireo dia nitory ireo vondrona Google ihany koa i Adnan Oktar, izay nitarika ny fandraràna ny tranonkala.
Nanakana ny fidirana tamin'ny tranonkala fifampizaràna horonantsary, Youtube sy Dailymotion ihany koa i Torkia noho ireo lahatsary izay voalaza fa nanevateva ny ray mpanorina ao amin'ny firenena, Kemal Atatürk.
Nosakanan'ny fitsarana Tiorka ihany koa noho ny “fampiantranoana sary sy lahatsoratra izay heverina ho manevateva an'i Ataturk” ny Slide, ilay tambajotra sosialy fifaneraserana.
Fanavaozam-baovao voalohany tao amin'ny Cyber-Rights.Org.TR :
Notaterin'ny Turk.internet.com fa mifandraika amin'ny fanitsakitsahana ny fizakamanana ara-tsaina ny baikon'ny fanakanana. Manana ny zo hampita mivantana ny fitantarana ny lalao ligin'ny baolina kitra Tiorka ny Digitürk izay sehatra ho an'ny fahitalavitra nomerika any Tiorkia . Nahazo baiko avy tamin'ny fitsarana tao Diyarbakir ny Digitürk tamin'ny fanakanana araka ny vaovao tao amin'ny Turk.internet.com satria nisy ny famoahana bilaogy izay nanome vaovao sy rohy mankany amin'ireo tranonkala fantatra fa nampita ny fandefasana mivantana ny fandaharana nojirihina tamin'ny lalao ligin'ny baolina kitra.
Fanavaozam-baovao faharoa tao amin'ny CyberLaw Blog : Nitatitra ny CyberLaw Blog ny 28 Oktobra 2008 fa nofoanan'ny Fitsarana Heloka Bevava Ambaratonga Voalohany tao Diyarbakir ny fandraràna ny sehatra famahanana bilaogy blogspot.com:
Tsy mazava anefa na izany aza ny anton'ny nanafoanana ny baiko ary toa hita fa nofoanana ny fandraràna mandra-pahanomezan'ny Digitürk porofo ho an'ny fitsarana momba ny fitarainany tamin'ny fijirihana ny fandefasana ny lalao baolina kitra mivantana. Noho izany, tsy ho gaga aho raha mahita ny baiko fanakanana sy ny famerenana ny fandraràna indray .